Shirkado cusub Main - Gold Sanon International Co., Ltd.
Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (Halkan loogu yeeri sida HYST) waxaa la aasaasay 1958, waa hoosaad ah Hunan Valin Iron & Steel Group Co., Ltd. Waxa hadda waxay leedahay 3900 oo shaqaale ah oo la hantida guud ee 13.5 bilyan oo Yuan. Waxaa la aqoonsan yahay sidii sare iyo ganacsiga technology cusub, ganacsi la faa'ido in xuquuqda hantida aqooneed ee heer qaran, shirkad ka mid ah shirkadaha toban sare ee ganacsiga dhoofinta ee Gobolka Hunan iyo shirkad ka mid ah unugyada bandhig toban sare ee ammaanka Gobolka Hunan.
CITIC Pacific Gaarka Steel Holdings (CITIC Steel gaarka ah ee gaaban), waa hoosaad ah CITIC Limited. Waxaa iska leh shirkadaha sida tooska Jiangyin Xingcheng Gaarka Steel Works Co., Ltd, Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, Daye Gaarka Steel Co., Ltd, Qingdao Gaarka Steel Co., Ltd, Jingjiang Gaarka Steel Co., Ltd, Tongling Pacific Gaarka Qalabka Co., Ltd iyo Yangzhou Pacific Gaarka Qalabka Co., Ltd, la xirrira qaabka a xeebaha iyo webi istiraatiijiga ah ee silsilad warshadaha.
Yangzhou Chengde Steel tuuboyinka Co., Ltd. waa iska wareejin ka Jiangsu Chengde Steel tuuboyinka Co., Ltd., taas oo ah shirkada labaad ee dalka-fasalka, sayniska gobolka iyo technology ganacsi gaar loo leeyahay oo la-soo-saarka ugu weyn ee kala duwan 219-720 × 3 a steels carbon -100mm iyo tuubooyinka steel steel daawaha aan xuduud lahayn. wax soo saarka wuxuu daboolayaa warshado badan sida xoogga kulul, kiimikada & Warshadani, kuleeliyaha, Farsamada, Oil & gaaska, dhuxusha iyo Dhismaha maraakiibta. Shirkadda waa ganacsi gudaha ee technology gaar gaar ah oo uu leeyahay noocyo kala duwan oo ugu dhameystiran ee tuubooyinka bir aan xuduud lahayn.
Baotou Iron iyo Steel Group, Baotou Steel ama Baogang Group waa shirkad dawladdu leedahay bir iyo bir Baotou, Inner Mongolia, Shiinaha. Waxaa habayn 1998 ka Baotou Iron iyo Company Steel aasaasay 1954 Waa shirkada ugu weyn steel in Inner Mongolia. Waxay leedahay saldhig wax soo saarka badan oo bir iyo bir iyo sayniska saldhig cilmi iyo wax soo saarka ugu weyn ee cir iyo naadir ku yahay Shiinaha. Its shirkadda kabista, Inner Mongolia Baotou Steel Midowga (SSE: 600010), waxaa la aasaasay iyo ku qoran Stock Exchange Shanghai ee 1997.